Movies – Alpha Premium
Nayakan (1987) (App member only) ##unicode အဟောင်းပေမယ့်ကောင်းနေဆဲဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့ "Nayakan" ဆိုတဲ့အိန္ဒိယကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ရှာသီဗယ်လူဟာအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ရဲ့သားဖြစ်ပါတယ် ငယ်ငယ်ကတည်းကအဖေဖြစ်သူဟာ ရဲတွေရဲ့ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံလိုက်လိုက်ရတာကို မြင်လိုက်ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် အဖေမရှိတော့တဲ့ဗယ်လူဟာဘုံဘေကိုတက်လာပြီးတော့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ရှာဖွေရင်းရုန်းကန်ရပ်တည်နေရတာပေါ့ ဒါပေမယ့်ဗယ်လူတစ်ယောက်အဖေအရင်းလိုချစ်ခင်ရတဲ့သူဟာလည်း ရဲတွေရဲ့သတ်ဖြတ်တာကိုခံလိုက်ရပါတယ် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဗယ်လူတစ်ယောက်သူ့စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်တော့ဘဲ အဲ့ဒီရဲအရာရှိကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ် အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ရှာသီဗယ်လူဟာ ဆင်းရဲသားတွေရဲ့ အရှင်သခင်လိုဖြစ်လာပါတယ် သူ့ကိုအကူအညီတောင်းသမျှကိုကူညီပေးရင်း ထောက်ပံ့ပေးရင်းနဲ့ပဲ ဗယ်လူဟာတမီးလ်နယ်မြေရဲ့ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်လာပါတယ် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့အင်အားကြီးလာတဲ့လူမိုက်ကြီးရှာသီဗယ်လူတစ်ယောက် သူ့ရဲ့အင်ပါယာကြီးကို ဘယ်လောက်အထိကြာအောင်ထိန်းထားနိုင်မှာလဲ သူ့ရဲ့ကျရှုံးချိန်တွေရောက်လာဦးမှာလားဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi အေဟာင္းေပမယ့္ေကာင္းေနဆဲဇာတ္ကားေလးျဖစ္တဲ့ "Nayakan" ဆိုတဲ့အိႏၵိယကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ရွာသီဗယ္လူဟာအစိုးရဆန႔္က်င္ေရးသမဂၢေခါင္းေဆာင္ရဲ႕သားျဖစ္ပါတယ္ ငယ္ငယ္ကတည္းကအေဖျဖစ္သူဟာ ရဲေတြရဲ႕ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံလိုက္လိုက္ရတာကို ျမင္လိုက္ရတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ အေဖမရွိေတာ့တဲ့ဗယ္လူဟာဘုံေဘကိုတက္လာၿပီးေတာ့ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ရွာေဖြရင္း႐ုန္းကန္ရပ္တည္ေနရတာေပါ့ ဒါေပမယ့္ဗယ္လူတစ္ေယာက္အေဖအရင္းလိုခ်စ္ခင္ရတဲ့သူဟာလည္း ရဲေတြရဲ႕သတ္ျဖတ္တာကိုခံလိုက္ရပါတယ္ ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ဗယ္လူတစ္ေယာက္သူ႔စိတ္ကိုမထိန္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ အဲ့ဒီရဲအရာရွိကိုလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္လိုက္ပါတယ္ အဲ့ဒီကေနစၿပီးေတာ့ရွာသီဗယ္လူဟာ ဆင္းရဲသားေတြရဲ႕ အရွင္သခင္လိုျဖစ္လာပါတယ္ သူ႔ကိုအကူအညီေတာင္းသမွ်ကိုကူညီေပးရင္း ေထာက္ပံ့ေပးရင္းနဲ႔ပဲ ဗယ္လူဟာတမီးလ္နယ္ေျမရဲ႕ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္လာပါတယ္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔အင္အားႀကီးလာတဲ့လူမိုက္ႀကီးရွာသီဗယ္လူတစ္ေယာက္ သူ႔ရဲ႕အင္ပါယာႀကီးကို ဘယ္ေလာက္အထိၾကာေအာင္ထိန္းထားႏိုင္မွာလဲ သူ႔ရဲ႕က်ရႈံးခ်ိန္ေတြေရာက္လာဦးမွာလားဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ============================================================================ App ေဒါင္းရန္ App Link TV Version app link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 0969117714
IMDB: 8.6/10 19,581 votes
Kung Food (2018) ##unicode ဒီနေ့မှာတော့အားလုံးလည်း စိတ်အပန်းပြေသွားအောင် "Kung Food"ဆိုတဲ့ ကာတွန်းကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းလေးကတော့ပေါင်ဟာဆိုရင် အပူပေးပြီးပေါင်းထားတဲ့ပေါင်မုန့်လေးဖြစ်ပြီးတော့ အမြဲတမ်းဟီးရိုးတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးပဲ တွေးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ဒါနဲ့တစ်ရက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူက အပြင်လောကကြီးကိုစူးစမ်းပြီး မကောင်းတဲ့သူတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့အတွက်ဆိုပြီး ပေါင်လေးကိုအပြင်ကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့စူပါပေါင်လေးဟာပင်လယ်ထဲကိုထွက်မယ့်သင်္ဘောကြီးတစ်စီးပေါ်ကိုလိုက်ပါလာခဲ့တာပေါ့ ဖြစ်ချင်တော့စူပါပေါင်လေးစီးလာတဲ့သင်္ဘောကိုပင်လယ်ဓားပြတွေကဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ် အမြဲတမ်းဟီးရိုးတစ်ယောက် သူရဲကောင်းဖြစ်ချင်နေတဲ့ပေါင်အတွက် လူစွမ်းကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရလာတယ်ပြောရမှာပေါ့ ပေါင်မုန့်လေးဖြစ်တဲ့ပေါင်ဟာမကောင်းတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုတိုက်ခိုက်သွားမလဲ သူဖြစ်ချင်တဲ့သူရဲကောင်းအဖြစ်ကိုရောက်ရှိနိုင်မှာလားဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ကာတွန်းကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi ဒီေန႔မွာေတာ့အားလုံးလည္း စိတ္အပန္းေျပသြားေအာင္ "Kung Food"ဆိုတဲ့ ကာတြန္းကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းေလးကေတာ့ေပါင္ဟာဆိုရင္ အပူေပးၿပီးေပါင္းထားတဲ့ေပါင္မုန႔္ေလးျဖစ္ၿပီးေတာ့ အၿမဲတမ္းဟီး႐ိုးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ ကမာၻႀကီးကိုကယ္တင္ဖို႔အတြက္ဆိုၿပီးပဲ ေတြးေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ ဒါနဲ႔တစ္ရက္မွာေတာ့သူ႔ရဲ႕ဆရာျဖစ္သူက အျပင္ေလာကႀကီးကိုစူးစမ္းၿပီး မေကာင္းတဲ့သူေတြကိုႏွိမ္နင္းဖို႔အတြက္ဆိုၿပီး ေပါင္ေလးကိုအျပင္ကိုလႊတ္လိုက္ပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔စူပါေပါင္ေလးဟာပင္လယ္ထဲကိုထြက္မယ့္သေဘၤာႀကီးတစ္စီးေပၚကိုလိုက္ပါလာခဲ့တာေပါ့ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့စူပါေပါင္ေလးစီးလာတဲ့သေဘၤာကိုပင္လယ္ဓားျပေတြကဝင္ၿပီးေတာ့တိုက္ခိုက္ပါေတာ့တယ္ အၿမဲတမ္းဟီး႐ိုးတစ္ေယာက္ သူရဲေကာင္းျဖစ္ခ်င္ေနတဲ့ေပါင္အတြက္ လူစြမ္းေကာင္းျဖစ္ဖို႔အခြင့္အလမ္းရလာတယ္ေျပာရမွာေပါ့ ေပါင္မုန႔္ေလးျဖစ္တဲ့ေပါင္ဟာမေကာင္းတဲ့သူေတြကိုဘယ္လိုတိုက္ခိုက္သြားမလဲ သူျဖစ္ခ်င္တဲ့သူရဲေကာင္းအျဖစ္ကိုေရာက္ရွိႏိုင္မွာလားဆိုတာကိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမယ့္ကာတြန္းကားေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ============================================================================ GDtot လင့္ေဒါင္းနည္း (အစိမ္းျပထားတာကိုကလစ္ပါ) GDtotဒေါင်းနည်း (uc browser ကိုသုံးရင်ပိုကောင်းပါတယ်) Mega.nz Link ဒေါင်းနည်း Gdrive Linkဒေါင်းနည်း App ေဒါင္းရန္ App Link TV Version app link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 0969117714
Kuttavum Shikshayum (2022) (app only) ##unicode ဒီကားလေးကတော့ ကယ်ရာလာက ထူးဆန်းတဲ့ဖောက်ထွင်းခံရမှုအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာပါ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ၂၀၁၅ခုနှစ်က ကာစာရာဂုဒ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျောက်မျက်ရတနာ ဖောက်ထွင်းမှု ဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ်အခြေခံထားပါတယ် ဒီဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာတွေထဲက တစ်ယောက်ကလည်းဒီဖြစ်ရပ်မှန် အမှုမှာ အမှန်တကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအစ ကယ်ရာလာမှာ ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်တစ်ဆိုင် ဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရပါတယ် ဒီအမှုအတွက် ကယ်ရာလာရဲတပ်ဖွဲက အဖွဲဝင် ၅ယောက်ပါတဲ့အဖွဲဟာ စုံစမ်းကြရင်းရာဂျက်စတန်က ကြောက်မက်ဖွယ် ဒဟနဂန်ဂ်ျရွာကို သွားပြီး အဲ့ရွာကပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဖိုအသက်စွန့်ပြီး သွားခဲ့ကြရာ... နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာဒီကားလေးမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ##zawgyi ဒီကားေလးကေတာ့ ကယ္ရာလာက ထူးဆန္းတဲ့ေဖာက္ထြင္းခံရမႈအေၾကာင္းကို႐ိုက္ကူးထားတာပါ ဒီ႐ုပ္ရွင္ဟာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္က ကာစာရာဂုဒ္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေဖာက္ထြင္းမႈ ျဖစ္ရပ္မွန္အေပၚအေျခခံထားပါတယ္ ဒီဇာတ္ၫႊန္းေရးဆရာေတြထဲက တစ္ေယာက္ကလည္းဒီျဖစ္ရပ္မွန္ အမႈမွာ အမွန္တကယ္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသူျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအစ ကယ္ရာလာမွာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္တစ္ဆိုင္ ေဖာက္ထြင္းခံခဲ့ရပါတယ္ ဒီအမႈအတြက္ ကယ္ရာလာရဲတပ္ဖြဲက အဖြဲဝင္ ၅ေယာက္ပါတဲ့အဖြဲဟာ စုံစမ္းၾကရင္းရာဂ်က္စတန္က ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ဒဟနဂန္ဂ္်႐ြာကို သြားၿပီး အဲ့႐ြာကျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကိုဖမ္းဖိုအသက္စြန႔္ၿပီး သြားခဲ့ၾကရာ... ေနာက္ပိုင္းမွာဘာေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲဆိုတာဒီကားေလးမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Review – Hnin Aye Wai File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hnin Aye Wai Encoded ...
IMDB: 5.5/10 175 votes
Blasted (2022) ##unicode အသစ်ထွက်ဟာသအက်ရှင်ကားလေးဖြစ်တဲ့ "Blasted" ဆိုတဲ့ကားလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ နော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့ ဟက်ဇ်ဒါလန်ဆိုတဲ့နယ်မြေလေးဟာအရင်ကတော့ငြိမ်းချမ်းတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် တစ်ရက်မှာထူးဆန်းတဲ့အလင်းတန်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ် သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းဒီအလင်းတန်းတွေကိုအဖြေရှာဖို့ကြိုးစားကြပေမယ့်ဘာမှမသိခဲ့ရဘဲလက်လျှောခဲ့ရပါတယ် လူတွေကလည်းဂြိုဟ်သားတွေပဲလား ယူအက်ဖ်အိုတွေပဲလားဆိုပြီး သို့လောသို့လောဖြစ်နေတာပေါ့ တစ်ဖက်မှာတော့ဆီဘက်ရှန်ဟာအလုပ်ဂျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ အမြဲတမ်းအလုပ်တွေပဲရှုပ်နေပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်ထွက်တာ သောက်စားတာမျိုးတောင်မရှိတဲ့သူပါ အလုပ်တွေနဲ့ပဲရှုပ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကြီးဟာ သူ့ရဲ့လူပျိုညပါတီအတွက် သူ့သူငယ်ချင်းက ဟက်ဇ်ဒါလန်ကိုခရီးထွက်ဖို့ စီစဉ်ရာကနေပြီး လုံးဝကိုအပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲသွားပါတယ် ဂြိုဟ်သားတွေရှိတယ်ဆိုပြီး ကောလဟာလတွေထွက်နေတဲ့နေရာမှာ ဆီဘက်ရှန်တစ်ယောက်တကယ်ပဲ ဂြိုဟ်သားလိုမျိုးလူတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ် ဒီလိုနဲ့ဟက်ဇ်ဒါလန်ကအသက်ရှင်လျက်ထွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆီဘက်ရှန်တစ်ယောက်ရုန်းကန်ရတော့တာပေါ့ နောက်ဆုံးမှာဆီဘက်ရှန်တစ်ယောက်ဘေးကင်းကင်းနဲ့ထွက်သွားနိုင်မလားဆိုတာကိုအသည်းတယားယားနဲ့ကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ##zawgyi အသစ္ထြက္ဟာသအက္ရွင္ကားေလးျဖစ္တဲ့ "Blasted" ဆိုတဲ့ကားေလးကိုေ႐ြးခ်ယ္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံရဲ႕ ဟက္ဇ္ဒါလန္ဆိုတဲ့နယ္ေျမေလးဟာအရင္ကေတာ့ၿငိမ္းခ်မ္းတိတ္ဆိတ္တဲ့ေနရာေလးျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ တစ္ရက္မွာထူးဆန္းတဲ့အလင္းတန္းေတြထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ထူးဆန္းတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြတစ္ခုၿပီးတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္ သိပၸံပညာရွင္ေတြကလည္းဒီအလင္းတန္းေတြကိုအေျဖရွာဖို႔ႀကိဳးစားၾကေပမယ့္ဘာမွမသိခဲ့ရဘဲလက္ေလွ်ာခဲ့ရပါတယ္ လူေတြကလည္းၿဂိဳဟ္သားေတြပဲလား ယူအက္ဖ္အိုေတြပဲလားဆိုၿပီး သို႔ေလာသို႔ေလာျဖစ္ေနတာေပါ့ တစ္ဖက္မွာေတာ့ဆီဘက္ရွန္ဟာအလုပ္ဂ်ိဳးတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အၿမဲတမ္းအလုပ္ေတြပဲရႈပ္ေနၿပီး သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အျပင္ထြက္တာ ေသာက္စားတာမ်ိဳးေတာင္မရွိတဲ့သူပါ အလုပ္ေတြနဲ႔ပဲရႈပ္ေနတဲ့သူ႔ရဲ႕ဘဝႀကီးဟာ သူ႔ရဲ႕လူပ်ိဳညပါတီအတြက္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းက ဟက္ဇ္ဒါလန္ကိုခရီးထြက္ဖို႔ စီစဥ္ရာကေနၿပီး လုံးဝကိုအေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္ ၿဂိဳဟ္သားေတြရွိတယ္ဆိုၿပီး ေကာလဟာလေတြထြက္ေနတဲ့ေနရာမွာ ဆီဘက္ရွန္တစ္ေယာက္တကယ္ပဲ ၿဂိဳဟ္သားလိုမ်ိဳးလူေတြကိုေတြ႕လိုက္ရပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔ဟက္ဇ္ဒါလန္ကအသက္ရွင္လ်က္ထြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ဆီဘက္ရွန္တစ္ေယာက္႐ုန္းကန္ရေတာ့တာေပါ့ ေနာက္ဆုံးမွာဆီဘက္ရွန္တစ္ေယာက္ေဘးကင္းကင္းနဲ႔ထြက္သြားႏိုင္မလားဆိုတာကိုအသည္းတယားယားနဲ႔ၾကည့္ရႈရမယ့္ဇာတ္ကားေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Myet Chel Encoded by Arrow ============================================================================ GDtot ...
The Last Warrior: A Messenger of Darkness (2021) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခါမှာ Posledniy Bogatyr Poslannik Tmy (2021)[The Last Warrior: A Messenger of Darkness]ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ဗာစီလီဆာကိုကယ်တင်ကြမယ့် အီဗန်တို့အဖွဲ့ရဲ့ စွန့်စားခန်းခရီးအကြောင်းကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရှုကြရမှာပါ။ အီဗန်နဲ့သူရဲ့သတို့သမီးလောင်းလေးဖြစ်တဲ့ဗာစီလီဆာတို့ဟာ ခမ်းနားတဲ့လက်ထပ်ပွဲတစ်ခုကျင်းပဖို့စီစဉ်နေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လက်ထပ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလမှာပဲ မကောင်းဆိုးဝါး ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ ဗာစီလီဆာကို ဖမ်းသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့် ဗာစီလီဆာကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားရင်း အီဗန်နဲ့သူရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာ မော်စကိုမြို့တော်ကိုရာက်ရှိသွားပါတော့တယ်။အီဗန်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်တော့ မော်စကိုမြို့တော်ဟာ ဘယ်တုန်းကမှမသိခဲ့ဖူးတဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ။ အဲဒီလိုနဲ့ သူတို့တစ်တွေဟာ အဲဒီခေတ်မီကမ္ဘာကြီးထဲမှာ ဗာစီလီဆာကိုရှာဖွေဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့........ အီဗန်နဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာ ဘယ်လိုတွေကြိုးစားရှာဖွေကြမလဲ၊ ဗာစီလီဆာကို ကယ်တင်နိုင်ပါ့မလား၊ မကောင်းဆိုးဝါးကိုအနိုင်တိုက်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ဒီဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ့ရှိကြရမှာပါ။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါမွာ Posledniy Bogatyr Poslannik Tmy (2021)[The Last Warrior: A Messenger of Darkness]ဆိုတဲ့ ဇာတ္ကားေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားထဲမွာေတာ့ ဗာစီလီဆာကိုကယ္တင္ၾကမယ့္ အီဗန္တို႔အဖြဲ႕ရဲ႕ စြန္႔စားခန္းခရီးအေၾကာင္းကို စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ၾကည့္ရႈၾကရမွာပါ။ အီဗန္နဲ႔သူရဲ႕သတို႔သမီးေလာင္းေလးျဖစ္တဲ့ဗာစီလီဆာတို႔ဟာ ခမ္းနားတဲ့လက္ထပ္ပြဲတစ္ခုက်င္းပဖို႔စီစဥ္ေနခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လက္ထပ္ပြဲအတြက္လိုအပ္တဲ့ကိစၥေတြကိုေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ကာလမွာပဲ မေကာင္းဆိုးဝါး ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာၿပီးေတာ့ ဗာစီလီဆာကို ဖမ္းသြားခဲ့တယ္။အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဗာစီလီဆာကိုကယ္တင္ဖို႔ႀကိဳးစားရင္း အီဗန္နဲ႔သူရဲ႕မိတ္ေဆြေတြဟာ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ေတာ္ကိုရာက္ရွိသြားပါေတာ့တယ္။အီဗန္ရဲ႕မိတ္ေဆြေတြအတြက္ေတာ့ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ ...
The Last Warrior: A Messenger of Darkness (2021)
The Witch: Part 1. The Subversion (2018) ##unicode The Witch ဇာတ်ကားကတော့ မင်းသမီးချော Kim Da miနဲ့ မင်းသားချော Choi Woo shikတို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကားဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားစမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုကနေ ထွက်ပြေးလာတဲ့ အသက်၈နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ကို ရွာတစ်ရွာကစုံတွဲတစ်တွဲကနေ ခေါ်ယူမွေးစားကာ Koo jayoonလို့ အမည်ပေးခဲ့တယ်။မှတ်ဉာဏ်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ KooJayoonက မိဘတွေနဲ့အတူ ဘဝကိုအေးအေးဆေးဆေးဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။Koo jayoonအထက်တန်းကျောင်းသူဖြစ်လာတော့ မိဘတွေရဲ့ ငွေကြေးအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက် ဆုကြေးငွေရတဲ့သီချင်း‌ဆိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမထွက်ပြေးလာတဲ့ စမ်းသပ်ခန်းကလူတွေက Koojayoonကို မှတ်မိသွားပြီး ပြန်လည်ဖမ်းဆီးဖို့ ကြိုးစားလာခဲ့တယ်။အတိတ်ကမှတ်ဉာဏ်တွေ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ Koojayoonတစ်ယောက် သူမကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့လူတွေလက်ကနေ လွှတ်မြောက်ပါ့မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi The Witch ဇာတ္ကားကေတာ့ မင္းသမီးေခ်ာ Kim Da miနဲ႔ မင္းသားေခ်ာ Choi Woo shikတို႔ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ကားျဖစ္ပါတယ္။ ကိုရီးယားစမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုကေန ထြက္ေျပးလာတဲ့ အသက္၈ႏွစ္အ႐ြယ္ကေလးတစ္ေယာက္ကို ႐ြာတစ္႐ြာကစုံတြဲတစ္တြဲကေန ေခၚယူေမြးစားကာ Koo jayoonလို႔ အမည္ေပးခဲ့တယ္။မွတ္ဉာဏ္ေတြေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ KooJayoonက မိဘေတြနဲ႔အတူ ဘ၀ကိုေအးေအးေဆးေဆးျဖတ္သန္းခဲ့တယ္။Koo jayoonအထက္တန္းေက်ာင္းသူျဖစ္လာေတာ့ မိဘေတြရဲ႕ ေငြေၾကးအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔အတြက္ ဆုေၾကးေငြရတဲ့သီခ်င္း‌ဆိုၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုမွာ ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့တယ္။ဒါေပမဲ့သူမထြက္ေျပးလာတဲ့ စမ္းသပ္ခန္းကလူေတြက Koojayoonကို မွတ္မိသြားၿပီး ျပန္လည္ဖမ္းဆီးဖို႔ ...
IMDB: 7.1/10 10,327 votes
Atithi Devobhava (2022) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ "Atithi Devo Bhava"ဆိုတဲ့အိန္ဒိယအချစ်အက်ရှင်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့အာဘေဟာဆိုရင်ထူးဆန်းတဲ့ရောဂါတစ်မျိုးကိုခံစားနေရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် သူ့ရဲ့ရောဂါကို "mono-phobia"လို့ခေါ်ပြီးတော့ ရောဂါလက္ခဏာကတော့ တခြားသူတွေလိုမျိုးတစ်ယောက်တည်းမနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် ဘေးနားမှာအနည်းဆုံးလူတစ်ယောက်တော့ရှိနေမှအသက်ရှင်လို့ရတဲ့သူမျိုးပေါ့ ဒီလိုရောဂါရှိနေတဲ့အာဘေဟာဆိုရင် ဘယ်သွားသွားသူ့သူငယ်ချင်းကိုခေါ်ပြီးတော့သွားလေ့ရှိပါတယ် ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပဲ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးချစ်သူကောင်မလေးကစိတ်ပျက်ပြီး ထားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့တစ်ရက်မှာတော့ဗိုင်ရှ်နဗီဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ပြီး အာဘေတစ်ယောက်ချစ်မိသွားခဲ့ပါတယ် ဗိုင်ရှ်နဗီကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားတဲ့ အာဘေဟာသူ့ရောဂါအကြောင်းသိသွားရင် ပထမကောင်မလေးလိုမျိုး သူ့ကိုထားသွားမှာကို အရမ်းကိုစိုးရိမ်နေတော့တာပေါ့ ဒါပေမယ့်ဒီလိုမျိုးရောဂါကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့မှအထင်လွဲစရာတွေဖြစ်ပြီးကိစ္စတွေကပိုဆိုးကုန်ပါတော့တယ် အာဘေတစ်ယောက်ဒီရောဂါကြီးကြောင့် ဘယ်လိုပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ရမလဲ ဗိုင်ရှ်နဗီကရောနားလည်ပေးနိုင်မှာလားဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ "Atithi Devo Bhava"ဆိုတဲ့အိႏၵိယအခ်စ္အက္ရွင္ကားေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာေလးကေတာ့အာေဘဟာဆိုရင္ထူးဆန္းတဲ့ေရာဂါတစ္မ်ိဳးကိုခံစားေနရတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ သူ႔ရဲ႕ေရာဂါကို "mono-phobia"လို႔ေခၚၿပီးေတာ့ ေရာဂါလကၡဏာကေတာ့ တျခားသူေတြလိုမ်ိဳးတစ္ေယာက္တည္းမေနႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္ ေဘးနားမွာအနည္းဆုံးလူတစ္ေယာက္ေတာ့ရွိေနမွအသက္ရွင္လို႔ရတဲ့သူမ်ိဳးေပါ့ ဒီလိုေရာဂါရွိေနတဲ့အာေဘဟာဆိုရင္ ဘယ္သြားသြားသူ႔သူငယ္ခ်င္းကိုေခၚၿပီးေတာ့သြားေလ့ရွိပါတယ္ ဒီအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ပဲ သူ႔ရဲ႕ပထမဆုံးခ်စ္သူေကာင္မေလးကစိတ္ပ်က္ၿပီး ထားသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔တစ္ရက္မွာေတာ့ဗိုင္ရွ္နဗီဆိုတဲ့ေကာင္မေလးနဲ႔ေတြ႕ၿပီး အာေဘတစ္ေယာက္ခ်စ္မိသြားခဲ့ပါတယ္ ဗိုင္ရွ္နဗီကိုျမင္ျမင္ခ်င္းခ်စ္မိသြားတဲ့ အာေဘဟာသူ႔ေရာဂါအေၾကာင္းသိသြားရင္ ပထမေကာင္မေလးလိုမ်ိဳး သူ႔ကိုထားသြားမွာကို အရမ္းကိုစိုးရိမ္ေနေတာ့တာေပါ့ ဒါေပမယ့္ဒီလိုမ်ိဳးေရာဂါကိုဖုံးကြယ္ဖို႔ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔မွအထင္လြဲစရာေတြျဖစ္ၿပီးကိစၥေတြကပိုဆိုးကုန္ပါေတာ့တယ္ အာေဘတစ္ေယာက္ဒီေရာဂါႀကီးေၾကာင့္ ဘယ္လိုျပႆနာေတြရင္ဆိုင္ရမလဲ ဗိုင္ရွ္နဗီကေရာနားလည္ေပးႏိုင္မွာလားဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ============================================================================ GDtot လင့္ေဒါင္းနည္း (အစိမ္းျပထားတာကိုကလစ္ပါ) GDtotဒေါင်းနည်း (uc browser ကိုသုံးရင်ပိုကောင်းပါတယ်) Mega.nz Link ...
IMDB: N/A/10 551 votes
Pelli SandaD (2021) (App member only) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ပေါ့ပါ့ပါးပါးနဲ့ကြည့်ရှုလို့ရမယ့် "Pellisandad" ဆိုတဲ့အိန္ဒိယအချစ်ဟာသကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအစမှာဆိုရင်ဗာရှီတာဆိုတဲ့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်က သူ့ရဲ့အတ္ထုပတ္တိဇာတ်လမ်းအတွက်သူ့ဘဝအကြောင်းတွေနဲ့ အချစ်ရေးအကြောင်းတွေကိုပြောပြနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဗာရှီတာဟာဆိုရင် ငယ်စဉ်ကတည်းက အားကစားမှာလည်းပါရမီပါပြီးတော့ ဘယ်နေရာမှာမဆိုသွက်လက်ထက်မြက်ပြီး တက်ကြွတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် မိဘတွေကလည်းတစ်ဦးတည်းသောသားမလို့အရမ်းကိုချစ်ပြီး အလိုလိုက်ကြပါတယ် ဒီလိုနဲ့ဗာရှီတာကိုသင့်တော်တဲ့သူနဲ့အိမ်ထောင်ချပေးဖို့လုပ်တဲ့အခါဗာရှီတာက သူ့အိမ်ထောင်ဖက်ကို သူ့စိတ်ကြိုက်ပဲရွေးချယ်မယ်လို့ပြောလာပါတယ် ဒီလိုနဲ့ဗာရှီတာဟာသူ့ဝမ်းကွဲမင်္ဂလာဆောင်ကိုသွားရင်း ဆာဟာရှာဆိုတဲ့အဆော့သန်တဲ့ တက်ကြွတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုသွားပြီးတော့ကြိုက်မိပါတယ် ဒါပေမယ့်သူ့အဖေကတော့သာမန်မဟုတ်ပါဘူး အရမ်းကိုရှေးရိုးဆွဲပြီး သမီးတွေကိုသူပေးစားတဲ့သူနဲ့သာယူရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူကြီးဖြစ်ပါတယ် ဗာရှီတာတစ်ယောက် ဆာဟာရှာကိုလူ့ဂွစာအဖေကြီးဆီကနေ အရယူနိုင်ပါ့မလား ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးတွေကြုံတွေ့ရဦးမှာလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ေပါ့ပါ့ပါးပါးနဲ႔ၾကည့္ရႈလို႔ရမယ့္ "Pellisandad" ဆိုတဲ့အိႏၵိယအခ်စ္ဟာသကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအစမွာဆိုရင္ဗာရွီတာဆိုတဲ့နာမည္ႀကီးပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္က သူ႔ရဲ႕အတၳဳပတၱိဇာတ္လမ္းအတြက္သူ႔ဘဝအေၾကာင္းေတြနဲ႔ အခ်စ္ေရးအေၾကာင္းေတြကိုေျပာျပေနတာကိုျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ဗာရွီတာဟာဆိုရင္ ငယ္စဥ္ကတည္းက အားကစားမွာလည္းပါရမီပါၿပီးေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာမဆိုသြက္လက္ထက္ျမက္ၿပီး တက္ႂကြတဲ့လူငယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ မိဘေတြကလည္းတစ္ဦးတည္းေသာသားမလို႔အရမ္းကိုခ်စ္ၿပီး အလိုလိုက္ၾကပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔ဗာရွီတာကိုသင့္ေတာ္တဲ့သူနဲ႔အိမ္ေထာင္ခ်ေပးဖို႔လုပ္တဲ့အခါဗာရွီတာက သူ႔အိမ္ေထာင္ဖက္ကို သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ပဲေ႐ြးခ်ယ္မယ္လို႔ေျပာလာပါတယ္ ဒီလိုနဲ႔ဗာရွီတာဟာသူ႔ဝမ္းကြဲမဂၤလာေဆာင္ကိုသြားရင္း ဆာဟာရွာဆိုတဲ့အေဆာ့သန္တဲ့ တက္ႂကြတဲ့ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကိုသြားၿပီးေတာ့ႀကိဳက္မိပါတယ္ ဒါေပမယ့္သူ႔အေဖကေတာ့သာမန္မဟုတ္ပါဘူး အရမ္းကိုေရွး႐ိုးဆြဲၿပီး သမီးေတြကိုသူေပးစားတဲ့သူနဲ႔သာယူရမယ္လို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့သူႀကီးျဖစ္ပါတယ္ ဗာရွီတာတစ္ေယာက္ ဆာဟာရွာကိုလူ႔ဂြစာအေဖႀကီးဆီကေန အရယူႏိုင္ပါ့မလား ဘယ္လိုအခက္အခဲမ်ိဳးေတြႀကဳံေတြ႕ရဦးမွာလဲဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow ============================================================================ App ေဒါင္းရန္ App Link TV Version ...
IMDB: 4.6/10 235 votes
Anek (2022) ##unicode နိုင်ငံရေးအက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်တဲ့ "Anek" ဆိုတဲ့အိန္ဒိယဇာတ်ကားကောင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဂျိုရွှာဟာနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေနဲ့ သူပုန်အဖွဲ့တွေပေါများတဲ့ အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာ လျှို့ဝှက်မစ်ရှင်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့အေးဂျင့်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် သူ့ရဲ့တာဝန်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်လာနိုင်တဲ့သူတွေကိုရှင်းလင်းပြီး အင်အားအကြီးဆုံးသူပုန်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့တိုက်ဂါးဆန်ဂါနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုအဆင်ပြေချောမွေ့အောင် ‌နောက်ကွယ်ကနေကူညီဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ သူ့ရဲ့မစ်ရှင်အတွက်သူပုန်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေထဲကတစ်ဦးရဲ့သမီးဖြစ်သူ အိုင်ဒိုနဲ့မိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုရယူခဲ့ပါတယ် အိုင်ဒိုဟာဆိုရင်လူမျိုးမတူပေမယ့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်လက်ဝှေ့အားကစားမှာ‌ရွှေတံဆိပ်ယူပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ အေးဂျင့်ဂျိုရွှာတစ်ယောက်အခက်အခဲတွေကြားကသူ့နိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုတာဝန်ကျေပွန်အောင် ထမ်းရွက်သွားမလဲ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုကိုရောရယူလိုက်နိုင်မှာလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi နိုင်ငံရေးအက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်တဲ့ "Anek" ဆိုတဲ့အိန္ဒိယဇာတ်ကားကောင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဂျိုရွှာဟာနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေနဲ့ သူပုန်အဖွဲ့တွေပေါများတဲ့ အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာ လျှို့ဝှက်မစ်ရှင်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့အေးဂျင့်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် သူ့ရဲ့တာဝန်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်လာနိုင်တဲ့သူတွေကိုရှင်းလင်းပြီး အင်အားအကြီးဆုံးသူပုန်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့တိုက်ဂါးဆန်ဂါနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုအဆင်ပြေချောမွေ့အောင် ‌နောက်ကွယ်ကနေကူညီဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ သူ့ရဲ့မစ်ရှင်အတွက်သူပုန်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေထဲကတစ်ဦးရဲ့သမီးဖြစ်သူ အိုင်ဒိုနဲ့မိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုရယူခဲ့ပါတယ် အိုင်ဒိုဟာဆိုရင်လူမျိုးမတူပေမယ့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်လက်ဝှေ့အားကစားမှာ‌ရွှေတံဆိပ်ယူပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ အေးဂျင့်ဂျိုရွှာတစ်ယောက်အခက်အခဲတွေကြားကသူ့နိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုတာဝန်ကျေပွန်အောင် ထမ်းရွက်သွားမလဲ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုကိုရောရယူလိုက်နိုင်မှာလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Myet Chel Encoded by Arrow ============================================================================ GDtot လင့္ေဒါင္းနည္း (အစိမ္းျပထားတာကိုကလစ္ပါ) GDtotဒေါင်းနည်း (uc browser ကိုသုံးရင်ပိုကောင်းပါတယ်) Mega.nz Link ဒေါင်းနည်း Gdrive Linkဒေါင်းနည်း App ေဒါင္းရန္ App Link TV Version app link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 0969117714
IMDB: 7.7/10 12,089 votes
Nenjuku Needhi (2022) (app only) ##unicode Nenjuku Needhiဇာတ်ကားမှာတော့ Vijayတစ်ယောက် လက်ထောက်ရဲမှူးအဖြစ် ရွာမြို့လေးတစ်မြို့ကို ပြောင်းလာပြီး 2ရက်အကြာမှာဘဲ မြို့မှာမိန်းကလေးနှစ်ယောက်အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့အမှုကို စုံစမ်းခဲ့ရပါတယ်။ သူရောက်နေတဲ့မြို့မှာ မျိုးရိုးဇာတ်ခွဲခြားမှုတွေကြောင့် အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ မျိုးရိုးနိမ့်မိန်းမငယ်လေးတွေရဲ့ အမှုကို ရဲတွေက ခပ်မြန်မြန်ပဲ့အမှုပိတ်ချင်နေပေမဲ့ Vijayတစ်ယောက်ကတော့ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာလဲ Kumuraလို့ခေါ်တဲ့ မြို့လူမိုက်က မျိုးရိုးဇာတ်နိမ့်လူတွေအတွက် ရပ်တည်ပေးခဲ့လို့ ရဲတွေက လိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Vijayတစ်ယောက် အမှုမှန်ပေါ်ဖို့ ကြိုးစာနေပေမဲ့လဲ့ သူ့လက်အောက်ကရဲတွေက ရာထူးကြီးအထက်ပိုင်းကလူတွေကို ရန်မစချင်တာကြောင့် အမှုရဲ့သက်သေတွေကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်ခဲ့တယ်။ရဲအရာရှိVijayနဲ့ လူမိုက်Kumuraတို့ ဒီအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုပါအုံး။ ##zawgyi Nenjuku Needhiဇာတ္ကားမွာေတာ့ Vijayတစ္ေယာက္ လက္ေထာက္ရဲမႉးအျဖစ္ ႐ြာၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ကို ေျပာင္းလာၿပီး 2ရက္အၾကာမွာဘဲ ၿမိဳ႕မွာမိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္အသတ္ခံလိုက္ရတဲ့အမႈကို စုံစမ္းခဲ့ရပါတယ္။ သူေရာက္ေနတဲ့ၿမိဳ႕မွာ မ်ိဳး႐ိုးဇာတ္ခြဲျခားမႈေတြေၾကာင့္ အသတ္ခံလိုက္ရတဲ့ မ်ိဳး႐ိုးနိမ့္မိန္းမငယ္ေလးေတြရဲ႕ အမႈကို ရဲေတြက ခပ္ျမန္ျမန္ပဲ့အမႈပိတ္ခ်င္ေနေပမဲ့ Vijayတစ္ေယာက္ကေတာ့ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။တစ္ဖက္မွာလဲ Kumuraလို႔ေခၚတဲ့ ၿမိဳ႕လူမိုက္က မ်ိဳး႐ိုးဇာတ္နိမ့္လူေတြအတြက္ ရပ္တည္ေပးခဲ့လို႔ ရဲေတြက လိုက္လံဖမ္းဆီးေနတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ Vijayတစ္ေယာက္ အမႈမွန္ေပၚဖို႔ ႀကိဳးစာေနေပမဲ့လဲ့ သူ႔လက္ေအာက္ကရဲေတြက ရာထူးႀကီးအထက္ပိုင္းကလူေတြကို ရန္မစခ်င္တာေၾကာင့္ အမႈရဲ႕သက္ေသေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ခဲ့တယ္။ရဲအရာရွိVijayနဲ႔ လူမိုက္Kumuraတို႔ ဒီအမႈမွန္ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဘယ္လိုႀကိဳးစားမလဲဆိုတာ ၾကည့္ရႈပါအုံး။ Review ...
IMDB: 8.1/10 316 votes
Forensic (2022) ##unicode ၁၀နှစ်အရွယ် ကလေးလေးတွေ မွေးနေ့မှာ ပြန်ပေးဆွဲအသတ်ခံရတဲ့ ကွင်းဆက်လူသတ်မှု စိတ္တဇဖြစ်စဉ်တွေကို အခြေခံထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီးမင်းသားVikrant Massey ၊ မင်းသမီး Radhika Apteတို့ရဲ့ အဓိကပါဝင်ထားတာလည်းဖြစ်လို့တကယ်ကို ကြည့်လို့ကောင်းနေတော့မှာပါ မာဆိုရီဆိုတဲ့မြို့မှာ ကလေးမလေးတွေ ရက်ရက်စက်စက်အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ် ဒီလူသတ်မှုတွေကိုအမှုစုံစမ်းရေးမှာ သိပ်တော်တဲ့ အင်စပတ်တာမေဟာနဲ့ ဆေးမှုခင်းအရာရှိ ဂျွန်နီတို့စုံစမ်းခဲ့ကြပါတယ် ဆေးမှုခင်းအရာရှိ ဂျွန်နီရဲ့ အမှုကိုဖော်ထုတ်ပုံတွေ ၊ အင်စပတ်တာရဲမေ မေဟာရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရည်အချင်းနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ဒီအမှုတွေကို ဖော်ထုတ်ပေမယ့် အမှုသဲလွန်စတွေဟာအမြဲပြောင်းလဲနေခဲ့ပြီး လူသတ်သမားကို ခန့်မှန်းဖို့ သိပ်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ် ဒီလိုကလေးမလေးတွေကိုရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ လူသတ်သမားပေါ်လာတဲ့အထိ ဇာတ်လမ်းလှည့်ကွက်ပေါင်းများစွာနဲ့ကြည့်ရူရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်လို့ လက်မလွှတ်တမ်းအားပေးကြပါလို့ ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ##zawgyi ၁၀ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးေလးေတြ ေမြးေန႔မွာ ျပန္ေပးဆြဲအသတ္ခံရတဲ့ ကြင္းဆက္လူသတ္မႈ စိတၱဇျဖစ္စဥ္ေတြကို အေျခခံထားတဲ့ ဇာတ္ကားေကာင္းျဖစ္ၿပီး နာမည္ႀကီးမင္းသားVikrant Massey ၊ မင္းသမီး Radhika Apteတို႔ရဲ႕ အဓိကပါဝင္ထားတာလည္းျဖစ္လို႔တကယ္ကို ၾကည့္လို႔ေကာင္းေနေတာ့မွာပါ မာဆိုရီဆိုတဲ့ၿမိဳ႕မွာ ကေလးမေလးေတြ ရက္ရက္စက္စက္အသတ္ခံခဲ့ရပါတယ္ ဒီလူသတ္မႈေတြကိုအမႈစုံစမ္းေရးမွာ သိပ္ေတာ္တဲ့ အင္စပတ္တာေမဟာနဲ႔ ေဆးမႈခင္းအရာရွိ ဂြၽန္နီတို႔စုံစမ္းခဲ့ၾကပါတယ္ ေဆးမႈခင္းအရာရွိ ဂြၽန္နီရဲ႕ အမႈကိုေဖာ္ထုတ္ပုံေတြ ၊ အင္စပတ္တာရဲေမ ေမဟာရဲ႕စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအရည္အခ်င္းနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး ဒီအမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပမယ့္ အမႈသဲလြန္စေတြဟာအၿမဲေျပာင္းလဲေနခဲ့ၿပီး ...
Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) ##unicode Marvelရဲ့ နောက်ဆုံးအသစ် Doctor Strangeကားကို အားပေးလို့ရပါပြီနော် ဒီတစ်ခါမှာလည်း Multiverse ကြီးနဲ့ Doctor Strange တို့ရဲ့ ပြဿနာပေါင်းစုံကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြင်တွေ့ရမှာပါ ဒီကားထဲမှာတော့ Multiverse တွေကို ခရီးသွားနိုင်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့မိန်းကလေး အမေရိကချာဗာ့စ်က ဇာတ်ကောင်အသစ်အနေနဲ့ ပါဝင်လာပါတယ် အဲဒီမိန်းကလေးရဲ့ ထူးခြားလှတဲ့ပါဝါကို Wanda က လိုချင်ခဲ့ပါတယ် Wanda ဟာ မှော်နက်လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရပြီး Scarlet Witch ဆိုတဲ့ စုန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ စကြာဝဠာတွေ အဖျက်စီးခံရမယ့်ကိန်းကနေ Doctor Strange တစ်ယောက် ဘယ်လိုကယ်တင်မလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာ အားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi Marvelရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအသစ္ Doctor Strangeကားကို အားေပးလို႔ရပါၿပီေနာ္ ဒီတစ္ခါမွာလည္း Multiverse ႀကီးနဲ႔ Doctor Strange တို႔ရဲ႕ ျပႆနာေပါင္းစုံကိုစိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ ဒီကားထဲမွာေတာ့ Multiverse ေတြကို ခရီးသြားႏိုင္တဲ့ထူးဆန္းတဲ့မိန္းကေလး အေမရိကခ်ာဗာ့စ္က ဇာတ္ေကာင္အသစ္အေနနဲ႔ ပါဝင္လာပါတယ္ အဲဒီမိန္းကေလးရဲ႕ ထူးျခားလွတဲ့ပါဝါကို Wanda က လိုခ်င္ခဲ့ပါတယ္ Wanda ဟာ ေမွာ္နက္လႊမ္းမိုးမႈကိုခံရၿပီး Scarlet Witch ...
IMDB: 7.3/10 206,950 votes
Watcher (2022) ##unicode ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ "Watcher" ဆိုတဲ့ ထိတ်လန့်သည်းဖိုကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဂျူလီယာဟာသူ့ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့အတူ မရင်းနှီးတဲ့မြို့တစ်ခုကိုပြောင်းလာခဲ့ပါတယ် ဂျူလီယာတစ်ယောက်ဘာသာစကားမတူ မရင်းနှီးတဲ့သူစိမ်းတွေကြားမှာတော်တော်လေးခက်ခဲပြီး စိတ်ဖိစီးစရာဖြစ်နေတာပေါ့ ဒါပေမယ့် တစ်ရက်မှာတော့စိတ်ဖိစီးစရာထက်ပိုပြီး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ် ဂျူလီယာာသူ့ရဲ့ပြတင်းပေါက်နေ မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ခန်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်း သူ့ကိုလည်းအမြဲတမ်း ပြတင်းပေါက်ကနေ ရပ်ကြည့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိနေခဲ့တာပါ အမှတ်တမဲ့နေလိုက်ဖို့စဉ်းစားထားပေမယ့်လည်း ဂျူလီယာတို့နေတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာ မိန်းကလေးတွေအသတ်ခံရတဲ့အမှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် အစကတည်းကကြောက်လန့်နေတဲ့ဂျူလီယာအတွက်ပိုပြီးတော့တောင် ထိတ်လန့်ဖွယ်ဖြစ်သွားတော့တာပေါ့ ဂျူလီယာကိုအမြဲရပ်ကြည့်နေတဲ့အဲ့ဒီလူကဘယ်သူဖြစ်မလဲ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူသတ်မှုတွေကရောအဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်နေတာလားဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ "Watcher" ဆိုတဲ့ ထိတ္လန႔္သည္းဖိုကားေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ဂ်ဴလီယာဟာသူ႔ရဲ႕ ခင္ပြန္းျဖစ္သူနဲ႔အတူ မရင္းႏွီးတဲ့ၿမိဳ႕တစ္ခုကိုေျပာင္းလာခဲ့ပါတယ္ ဂ်ဴလီယာတစ္ေယာက္ဘာသာစကားမတူ မရင္းႏွီးတဲ့သူစိမ္းေတြၾကားမွာေတာ္ေတာ္ေလးခက္ခဲၿပီး စိတ္ဖိစီးစရာျဖစ္ေနတာေပါ့ ဒါေပမယ့္ တစ္ရက္မွာေတာ့စိတ္ဖိစီးစရာထက္ပိုၿပီး ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ကိစၥတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္ ဂ်ဴလီယာာသူ႔ရဲ႕ျပတင္းေပါက္ေန မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တိုက္ခန္းကိုၾကည့္လိုက္တဲ့အခ်ိန္တိုင္း သူ႔ကိုလည္းအၿမဲတမ္း ျပတင္းေပါက္ကေန ရပ္ၾကည့္ေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ရွိေနခဲ့တာပါ အမွတ္တမဲ့ေနလိုက္ဖို႔စဥ္းစားထားေပမယ့္လည္း ဂ်ဴလီယာတို႔ေနတဲ့ေနရာတစ္ဝိုက္မွာ မိန္းကေလးေတြအသတ္ခံရတဲ့အမႈေတြထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္ အစကတည္းကေၾကာက္လန႔္ေနတဲ့ဂ်ဴလီယာအတြက္ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ထိတ္လန႔္ဖြယ္ျဖစ္သြားေတာ့တာေပါ့ ဂ်ဴလီယာကိုအၿမဲရပ္ၾကည့္ေနတဲ့အဲ့ဒီလူကဘယ္သူျဖစ္မလဲ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့လူသတ္မႈေတြကေရာအဲ့ဒီလူနဲ႔ပတ္သက္ေနတာလားဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ============================================================================ GDtot လင့္ေဒါင္းနည္း (အစိမ္းျပထားတာကိုကလစ္ပါ) GDtotဒေါင်းနည်း (uc browser ...
IMDB: 6.8/10 1,153 votes
Bad Blood (2022) ##unicode ဒီတစ်ခါမှာတော့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားကောင်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ခွေးတစ်ကောင်ကို သတ်ဖြတ်စားသောက်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုရဲတွေ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ထူးဆန်းဖွယ်ဖြစ်ရပ်တွေ ၊ ဇာတ်လမ်းလှည့်ကွက်တွေကိုမြင်တွေ့ရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ် ဒီကောင်လေးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပေမယ့်လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးဆီကို ရဲတွေက အပ်လိုက်ပါတယ် အဲဒီထူးဆန်းတဲ့ကောင်လေးဟာစိတ်ပုံမှန်ဆိုပေမယ့် သွေးကို နှစ်သက်တဲ့လူဖြစ်တာကြောင့် အကောင်တွေကိုသတ်ဖြတ်ပြီး သွေးသောက်နေခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ သူ ဘယ်ကလာလဲ ဘယ်မှာနေခဲ့လဲ မိသားစုတွေကိုရော သူကိုယ်တိုင် ဘာမှမမှတ်မိပါဘူး ဒီလို ထူးဆန်းလှတဲ့သူ့ဘဝဇာတ်လမ်းရဲ့ အကြောင်းရင်းက ဘာဖြစ်လာမလဲ သာမန်လူတစ်ယောက်ကဘာလို့ သွေးတွေဖောက်သောက်နေတာလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာ စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ သည္းထိတ္ရင္ဖိုဇာတ္ကားေကာင္းေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္ ေခြးတစ္ေကာင္ကို သတ္ျဖတ္စားေသာက္ေနတဲ့ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ကိုရဲေတြ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ထူးဆန္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္ေတြ ၊ ဇာတ္လမ္းလွည့္ကြက္ေတြကိုျမင္ေတြ႕ရမယ့္ ဇာတ္ကားေကာင္းတစ္ကားလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ဒီေကာင္ေလးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေပမယ့္လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးဆီကို ရဲေတြက အပ္လိုက္ပါတယ္ အဲဒီထူးဆန္းတဲ့ေကာင္ေလးဟာစိတ္ပုံမွန္ဆိုေပမယ့္ ေသြးကို ႏွစ္သက္တဲ့လူျဖစ္တာေၾကာင့္ အေကာင္ေတြကိုသတ္ျဖတ္ၿပီး ေသြးေသာက္ေနခဲ့တဲ့ လူတစ္ေယာက္ပါ သူ ဘယ္ကလာလဲ ဘယ္မွာေနခဲ့လဲ မိသားစုေတြကိုေရာ သူကိုယ္တိုင္ ဘာမွမမွတ္မိပါဘူး ဒီလို ထူးဆန္းလွတဲ့သူ႔ဘဝဇာတ္လမ္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းက ဘာျဖစ္လာမလဲ သာမန္လူတစ္ေယာက္ကဘာလို႔ ေသြးေတြေဖာက္ေသာက္ေနတာလဲဆိုတာ ဒီဇာတ္ကားမွာ ...
Crimes of the Future (2022) ##unicode မင်းသမီး Kristen Steward ပါဝင်ထားတဲ့အသစ်ထွက် ထိတ်လန့်သည်းဖိုသိပ္ပံကားဖြစ်တဲ့ "Crimes of the Future" ဆိုတဲ့ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် အနာဂတ်ကာလကိုရောက်သွားကြတဲ့အခါ လူသားတွေဟာ လေထုညစ်ညမ်းမှု ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် မျိုုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအသွင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြုံတွေ့လာရပါတယ် ပြောင်းလဲမှုတွေထဲမှာအထင်ရှားဆုံးကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုတွေနဲ့ ကူးစက်ရောဂါများပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ဆာလ်တန်ဆာဆိုတဲ့သူကတော့ဒီလိုနာကျင်မှုတွေကူးစက်ရောဂါတွေကို ခံစားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ် ဆာလ်တန်ဆာဟာသူ့ရဲ့ခန္တာကိုယ်တွင်းက ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု အသစ်ဖွံဖြိုးကြီးထွားလာမှုတွေကြောင့်စက်ပစ္စည်းတွေကိုမှီခိုပြီးအသက်ရှင်နေရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ဆာလ်တန်ဆာတစ်ယောက်သူ့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှု ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကြီးထွားမှုတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်သွားမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းပုံစံကထူးခြားပြီးတော့အနာဂတ်ကာလကိုစိတ်ကူးယဉ်ပြီး ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စက်ပစ္စည်းဆန်းတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာပါ ဇာတ်လမ်းပုံစံထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့သိပ္ပံကားကြိုက်တဲ့သူတွေအကြိုက်တွေ့ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် ##zawgyi မင္းသမီး Kristen Steward ပါဝင္ထားတဲ့အသစ္ထြက္ ထိတ္လန႔္သည္းဖိုသိပၸံကားျဖစ္တဲ့ "Crimes of the Future" ဆိုတဲ့ကားေလးကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ အနာဂတ္ကာလကိုေရာက္သြားၾကတဲ့အခါ လူသားေတြဟာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ မ်ိဳုး႐ိုးဗီဇဆိုင္ရာအသြင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုႀကဳံေတြ႕လာရပါတယ္ ေျပာင္းလဲမႈေတြထဲမွာအထင္ရွားဆုံးကေတာ့႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနာက်င္မႈေတြနဲ႔ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ဆာလ္တန္ဆာဆိုတဲ့သူကေတာ့ဒီလိုနာက်င္မႈေတြကူးစက္ေရာဂါေတြကို ခံစားေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္ ဆာလ္တန္ဆာဟာသူ႔ရဲ႕ခႏၲာကိုယ္တြင္းက ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြတစ္ခုၿပီးတစ္ခု အသစ္ဖြံၿဖိဳးႀကီးထြားလာမႈေတြေၾကာင့္စက္ပစၥည္းေတြကိုမွီခိုၿပီးအသက္ရွင္ေနရတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ ဆာလ္တန္ဆာတစ္ေယာက္သူ႔ရဲ႕မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေျပာင္းလဲမႈ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းႀကီးထြားမႈေတြကိုဘယ္လိုရင္ဆိုင္သြားမလဲဆိုတာကိုၾကည့္ရႈရမွာျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းပုံစံကထူးျခားၿပီးေတာ့အနာဂတ္ကာလကိုစိတ္ကူးယဥ္ၿပီး ႐ိုက္ကူးထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္စက္ပစၥည္းဆန္းေတြကိုလည္းျမင္ေတြ႕ရမွာပါ ဇာတ္လမ္းပုံစံထူးထူးဆန္းဆန္းနဲ႔သိပၸံကားႀကိဳက္တဲ့သူေတြအႀကိဳက္ေတြ႕ၾကမယ္လို႔ထင္ပါတယ္ Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow ============================================================================ GDtot လင့္ေဒါင္းနည္း (အစိမ္းျပထားတာကိုကလစ္ပါ) GDtotဒေါင်းနည်း (uc browser ...
IMDB: N/A/10 3,844 votes
Arjun: The Warrior Prince (2012) #unicode Arjun The Warrior Prince ဇာတ်ကားကတော့ Indianသမိုင်းကြောင်းကို Animationအဖြစ်ပုံဖောက်ထားတဲ့ ကာတွန်းကားဖြစ်ပါတယ်။ Panduဘုရင်ဟာ ညီတော်Karavasကို ထီးနန်းလွဲပေးခဲ့တဲ့အတွက် နောက်တက်ရမဲ့ဘုရင်နေရာကို Panduသားအကြီးဆုံးရော Karavaသားအကြီး Duryodhanနှစ်ယောက်လုံးက ထီးနန်းကိုရပိုင်ခွင့်ရှိနေပေမဲ့ ညီအကိုတွေကြားမှာ သွေးချောင်းစီးတိုက်ပွဲမဖြစ်စေချင်တဲ့ ဘုရင်Karavasဟာ Arjunတို့ညီအကိုငါးယောက်ကို တိုင်းပြည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုခွဲပေးလိုက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့Duryodhanဟာ တိုင်းပြည်ခွဲပေးရတာကို မကျေနပ်ကာ Arjunတို့ညီအကိုတွေကို လုပ်ကြံဖို့ကြံစည်ခဲ့တယ်။Arjunတစ်ယောက်ဟာ ညီအကိုတွေကို Duryodhan လက်ကနေကာကွယ်ဖို့အတွက် နတ်ဘုရားတွေနယ်မြေကိုသွားပြီးတော့ လက်ရုံးကည်ကိုတိုးတက်လာအောင်ကျင့်ကြံခဲ့တယ်။ Arjunတို့ ညီအကိုငါးယောက်နဲ့ Duryodhanတို့ ထီးနန်းလုပွဲမှာ ဘယ်သူအနိုင်ရမလဲလို့ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Arjun The Warrior Prince ဇာတ္ကားကေတာ့ Indianသမိုင္းေၾကာင္းကို Animationအျဖစ္ပုံေဖာက္ထားတဲ့ ကာတြန္းကားျဖစ္ပါတယ္။ Panduဘုရင္ဟာ ညီေတာ္Karavasကို ထီးနန္းလြဲေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ေနာက္တက္ရမဲ့ဘုရင္ေနရာကို Panduသားအႀကီးဆုံးေရာ Karavaသားအႀကီး Duryodhanႏွစ္ေယာက္လုံးက ထီးနန္းကိုရပိုင္ခြင့္ရွိေနေပမဲ့ ညီအကိုေတြၾကားမွာ ေသြးေခ်ာင္းစီးတိုက္ပြဲမျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ဘုရင္Karavasဟာ Arjunတို႔ညီအကိုငါးေယာက္ကို တိုင္းျပည္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုခြဲေပးလိုက္ခဲ့တယ္။ဒါေပမဲ့Duryodhanဟာ တိုင္းျပည္ခြဲေပးရတာကို မေက်နပ္ကာ Arjunတို႔ညီအကိုေတြကို လုပ္ႀကံဖို႔ႀကံစည္ခဲ့တယ္။Arjunတစ္ေယာက္ဟာ ညီအကိုေတြကို Duryodhan လက္ကေနကာကြယ္ဖို႔အတြက္ နတ္ဘုရားေတြနယ္ေျမကိုသြားၿပီးေတာ့ လက္႐ုံးကည္ကိုတိုးတက္လာေအာင္က်င့္ႀကံခဲ့တယ္။ Arjunတို႔ ညီအကိုငါးေယာက္နဲ႔ Duryodhanတို႔ ထီးနန္းလုပြဲမွာ ဘယ္သူအႏိုင္ရမလဲလို႔ ၾကည့္ရႈၾကပါအုံး။ Review – ...
IMDB: 6.8/10 1,734 votes
Blowback (2022) (app only) #unicode Blowback ဇာတ်ကားမှာတော့ Nickတစ်ယောက်ဟာ သမီးဖြစ်သူရဲ့ ရောဂါကိုကုသပေးဖို့ ငွေလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ရည်းစားဟောင်း Veronicaအကူအညီနဲ့ ဘဏ်ဓားပြတိုက်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တယ်။ Veronicaရဲ့ ရည်းစား Jackရဲ့အဖွဲ့နဲ့ ဘဏ်ဓားပြတိုက်မှုက အောင်မြင်သွားခဲ့ပေမဲ့ Jackနဲ့သူ့လူတွေက Nickကို သေနတ်နဲ့ပစ်ပြီးတော့ ငွေတွေမသွားခဲ့တယ်။ သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရတဲ့ Nickတစ်ယောက်ဟာ Jackတို့ကိုရှာဖွေပြီး သူငွေတွေကိုပြန်ယူဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာ ရဲတွေကလဲ ဘဏ်ဓားကးပြတိုက်သွားတဲ့ Nickတို့ကိုလိုက်ရှာနေခဲ့တယ်။ ရဲတွေလိုက်ရှာတာခံနေရတဲ့ Nickတစ်ယောက် သူ့ကိုသစ္စာဖောက်သွားတဲ့ Jackတို့အဖွဲ့ကို ရှာဖွေပြီး ငွေတွေပြန်ယူနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Blowback ဇာတ္ကားမွာေတာ့ Nickတစ္ေယာက္ဟာ သမီးျဖစ္သူရဲ႕ ေရာဂါကိုကုသေပးဖို႔ ေငြလိုအပ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရည္းစားေဟာင္း Veronicaအကူအညီနဲ႔ ဘဏ္ဓားျပတိုက္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့တယ္။ Veronicaရဲ႕ ရည္းစား Jackရဲ႕အဖြဲ႕နဲ႔ ဘဏ္ဓားျပတိုက္မႈက ေအာင္ျမင္သြားခဲ့ေပမဲ့ Jackနဲ႔သူ႔လူေတြက Nickကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္ၿပီးေတာ့ ေငြေတြမသြားခဲ့တယ္။ သစၥာေဖာက္ခံလိုက္ရတဲ့ Nickတစ္ေယာက္ဟာ Jackတို႔ကိုရွာေဖြၿပီး သူေငြေတြကိုျပန္ယူဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ရဲေတြကလဲ ဘဏ္ဓားကးျပတိုက္သြားတဲ့ Nickတို႔ကိုလိုက္ရွာေနခဲ့တယ္။ ရဲေတြလိုက္ရွာတာခံေနရတဲ့ Nickတစ္ေယာက္ သူ႔ကိုသစၥာေဖာက္သြားတဲ့ Jackတို႔အဖြဲ႕ကို ရွာေဖြၿပီး ေငြေတြျပန္ယူႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကို ၾကည့္ရႈၾကပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size ...
Bhool Bhulaiyaa2(2022) ##unicode ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီးအက်ရှေကူးမားရဲ့ Bhool Bhalaiyaa 1 မှာတုန်းက ဇာတ်အိမ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ကြောက်ဖို့လည်းကောင်း ဟာသလေးတွေရောပြီးတင်ဆက်ပုံလည်းကောင်းလို့ ဘောလိဝုဒ်ပရိသတ်တွေ အရမ်းကိုနှစ်ခြိုက်ခဲ့ကြပါတယ် အခု Bhool Bhalaiyaa2မှာရောဘယ်လိုမျိုးတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ဆွဲခေါ်သွားမလဲဆိုတာကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ရိဒ်နဲ့ ရူဟန်ဟာ မတော်တဆခရီးသွားရင်းနဲ့သိကျွမ်းခဲ့ကြတဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ပါတယ် ရိဒ်ဟာနိုင်ငံခြားကနေပညာသင်ပြီး အိမ်ကစီစဉ်ပေးတဲ့သူကို လက်ထပ်ပေးဖို့အတွက်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့်မထင်မှတ်ဘဲ ရိဒ်နဲ့လက်ထပ်မယ့်သူဟာညီမဖြစ်သူထရီရှာနဲ့ ချစ်ကြိုက်နေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ် ဒါကြောင့်ရိဒ်ဟာသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းဖက်နိုင်ဖို့ အတွက်မိသားစုကိုသေသွားပြီလို့အကြောင်းကြားပြီး ရူဟန်ရဲ့အကူအညီကိုယူကာသူတို့ရဲ့မကောင်းဆိုးဝါးနေထိုင်တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ အိမ်ဟောင်းကြီးဆီမှာသွားပြီး ပုန်းနေခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာတကယ်ပဲ ၁၈ နှစ်ကြာပိတ်မိနေတဲ့ အငြှိုးကြီး ဝိဉာဉ်ရှိနေတဲ့အခါမှာတော့.... ရူဟန်နဲ့ ရိဒ်တို့ ဘယ်လိုကြောက်မက်ဖွယ်တွေကြုံတွေ့ရမလဲ မကောင်းဆိုးဝါးဝိဉာဉ် လက်ထဲကလွတ်မြောက်နိုက်ပါ့မလား ဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ##zawgyi ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ မင္းသားႀကီးအက္ေရွကူးမားရဲ႕ Bhool Bhalaiyaa 1 မွာတုန္းက ဇာတ္အိမ္ခိုင္ခိုင္နဲ႔ေၾကာက္ဖို႔လည္းေကာင္း ဟာသေလးေတြေရာၿပီးတင္ဆက္ပုံလည္းေကာင္းလို႔ ေဘာလိဝုဒ္ပရိသတ္ေတြ အရမ္းကိုႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့ၾကပါတယ္ အခု Bhool Bhalaiyaa2မွာေရာဘယ္လိုမ်ိဳးေတြစိတ္ဝင္စားေအာင္ဆြဲေခၚသြားမလဲဆိုတာၾကည့္ရႈလိုက္ၾကရေအာင္ေနာ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ရိဒ္နဲ႔ ႐ူဟန္ဟာ မေတာ္တဆခရီးသြားရင္းနဲ႔သိကြၽမ္းခဲ့ၾကတဲ့အသိမိတ္ေဆြေတြျဖစ္ပါတယ္ ရိဒ္ဟာႏိုင္ငံျခားကေနပညာသင္ၿပီး အိမ္ကစီစဥ္ေပးတဲ့သူကို လက္ထပ္ေပးဖို႔အတြက္ျပန္လာတာျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္မထင္မွတ္ဘဲ ရိဒ္နဲ႔လက္ထပ္မယ့္သူဟာညီမျဖစ္သူထရီရွာနဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနတာကိုသိလိုက္ရပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ရိဒ္ဟာသူတို႔ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းဖက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္မိသားစုကိုေသသြားၿပီလို႔အေၾကာင္းၾကားၿပီး ႐ူဟန္ရဲ႕အကူအညီကိုယူကာသူတို႔ရဲ႕မေကာင္းဆိုးဝါးေနထိုင္တယ္လို႔နာမည္ႀကီးတဲ့ အိမ္ေဟာင္းႀကီးဆီမွာသြားၿပီး ပုန္းေနခဲ့ပါတယ္ အဲ့ဒီအိမ္ႀကီးမွာတကယ္ပဲ ၁၈ ႏွစ္ၾကာပိတ္မိေနတဲ့ ...
IMDB: 6.8/10 18,661 votes
Spiderhead (2022) ##unicode နာမည်ကြီးမင်းသား Chris Hemsworth ရဲ့နောက်ဆုံးအသစ်ထွက်ဇာတ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ဒီဇာတ်ကားကတော့ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ သိပ္ပံနည်းပညာဇာတ်လမ်းတွေကို မြင်တွေ့ရဦးမှာပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ အကျဉ်းသားတွေကို စမ်းသပ်ချင်တဲ့ စခန်းတစ်ခုကသူတို့ဆီကို လာရင် ထောင်ဒဏ်လျှော့ပေးမယ်ဆိုပြီး ထောင်သားတွေကို မျှားခေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီအကျဉ်းထောင် စခန်းက အခြားထောင်တွေနဲ့မတူဘူး အစောင့်တွေမရှိဘူး ထောင်သားတွေကို ကောင်းကောင်းကျွေးတယ် ကောင်းကောင်းထားတယ် ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေနောက်ကွယ်မှာ ဘာအကြံအစည်တွေရှိနေလဲ ဘယ်သူမှမသိပါဘူးအဲဒီက ထောင်မှူးဖြစ်သူ မစ္စတာအက်နက်စတီက ထောင်သားတွေကို စက်တစ်ခုတပ်ဆင်ပေးထားပြီး အချစ်စိတ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ နည်းပညာ ဆေးတစ်မျိုးကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ် အဲဒီဆေးပေးလိုက်ရင် လူတွေကကိုယ့်ရှေ့မှာရှိတဲ့လူကို ချစ်မိသွားကြတယ်ပေါ့ ဒါပေမယ့် အဲဒီဆေးအာနိသင်ပြယ်သွားတဲ့အချိန်မှာ သာမန်လိုမျိုးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ် ဒီဆေးရဲ့အာနိသင် ၊ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုစမ်းသပ်တဲ့ ‌နေရာမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ၊ ဇာတ်လမ်းလှည့်ကွက်တွေကို ဒီဇာတ်ကားမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်နဲ့ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်လို့ အားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi နာမည္ႀကီးမင္းသား Chris Hemsworth ရဲ႕ေနာက္ဆုံးအသစ္ထြက္ဇာတ္ကားကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္ ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ သိပၸံစိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္ကားေကာင္းျဖစ္လို႔စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ သိပၸံနည္းပညာဇာတ္လမ္းေတြကို ျမင္ေတြ႕ရဦးမွာပါ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးကေတာ့ အက်ဥ္းသားေတြကို စမ္းသပ္ခ်င္တဲ့ စခန္းတစ္ခုကသူတို႔ဆီကို လာရင္ ေထာင္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပးမယ္ဆိုၿပီး ေထာင္သားေတြကို မွ်ားေခၚခဲ့ပါတယ္အဲဒီအက်ဥ္းေထာင္ စခန္းက အျခားေထာင္ေတြနဲ႔မတူဘူး အေစာင့္ေတြမရွိဘူး ေထာင္သားေတြကို ေကာင္းေကာင္းေကြၽးတယ္ ေကာင္းေကာင္းထားတယ္ ဒါေပမယ့္သူတို႔ရဲ႕စမ္းသပ္ခ်က္ေတြေနာက္ကြယ္မွာ ဘာအႀကံအစည္ေတြရွိေနလဲ ဘယ္သူမွမသိပါဘူးအဲဒီက ေထာင္မႉးျဖစ္သူ ...
Centauro (2022) ##unicode Centauro ဇာတ်ကားမှာတော့ Rafaဟာမော်တော်ဆိုင်ကယ် racerတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့အရည်အချင်းတွေကို သဘောကျနေတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာ ဝင်ခွင့်ရအောင် ကြိုးစားနေတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့မိန်းမဖြစ်သူNataliaဟာ မူးယစ်းဂိုဏ်းတစ်ခုအပေါ်အကြွေး‌တင်နေတဲ့အတွက် Rafaတစ်ယောက် Natailaအတွက်နဲ့ အန္တရာယ်များတဲ့မူးယစ်ဂိုဏ်းသားတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဖို့သွားတွေ့ခဲ့ရတယ်။ မူးယစ်‌ဂိုဏ်းကလူတွေက Rafaကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ 2လလောက်မူးယစ်ဆေးကုန်သွယ်ပေးရင် Natalia ရဲ့အကြွေးတွေကို ချေပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တာကြောင့် Rafaတစ်ယောက်အန္တရာယ်များတဲ့ မူးယစ်ဆေးကုန်သွယ်တဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Rafaတစ်ယောက် သူ့အိမ်မက်နဲ့ဘဝကို စွန့်စားပြီးတော့ ဒီအန္တရာယ်များတဲ့အလုပ်ကို အဖမ်းမခံရဘဲလုပ်နိုင်ပါ့မလား။ မူးယစ်ဆေးဂိုဏ်းကလူတွေကရော Rafaနဲ့ Natalia ကိုလွယ်လွယ်နဲ့အလွတ်ပေးပ့ါမလားဆိုတာကို ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Centauro ဇာတ္ကားမွာေတာ့ Rafaဟာေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ racerတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြကို သေဘာက်ေနတဲ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွာ ၀င္ခြင့္ရေအာင္ ႀကိဳးစားေနတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕မိန္းမျဖစ္သူNataliaဟာ မူးယစ္းဂိုဏ္းတစ္ခုအေပၚအေႂကြး‌တင္ေနတဲ့အတြက္ Rafaတစ္ေယာက္ Natailaအတြက္နဲ႔ အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့မူးယစ္ဂိုဏ္းသားေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းဖို႔သြားေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ မူးယစ္‌ဂိုဏ္းကလူေတြက Rafaကို ဆိုင္ကယ္နဲ႔ 2လေလာက္မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္ေပးရင္ Natalia ရဲ႕အေႂကြးေတြကို ေခ်ေပးမယ္လို႔ေျပာခဲ့တာေၾကာင့္ Rafaတစ္ေယာက္အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္တဲ့အလုပ္ကိုစလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ Rafaတစ္ေယာက္ သူ႔အိမ္မက္နဲ႔ဘ၀ကို စြန႔္စားၿပီးေတာ့ ဒီအႏၲရာယ္မ်ားတဲ့အလုပ္ကို အဖမ္းမခံရဘဲလုပ္ႏိုင္ပါ့မလား။ မူးယစ္ေဆးဂိုဏ္းကလူေတြကေရာ Rafaနဲ႔ Natalia ကိုလြယ္လြယ္နဲ႔အလြတ္ေပးပ့ါမလားဆိုတာကို ၾကည့္ရႈၾကပါအုံး။ Review – Myet Chel File Size – ...